श्रीमतीले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे – Khabar Silo
श्रीमतीले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे
जीवन त्या’गको एक अनौठो घटना बाहिर आएको छ । भारत, गुजरातको अहमदाबादमा एक जना पतिले आफ्नी पत्नीसँग हैरान भएर यस सं’सारबाट विदा लिएका हुन् । यस घटनापछि सासुले आफ्नी बुहारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छिन् ।
यी ५ राशिका मानिसको जीवन कहिल्यै रहँदैन धनको अभाव !
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक राशिको केहि विशेषताहरु हुन्छन्। केहि राशि अत्यन्त भाग्यशाली मानिन्छन् भने केहि राशिका मानिसहरू जुनसुकै समयमा पनि समस्याहरूको सामना गरिरहेका हुन्छन्। केहि राशिका मानिस जीवनभर आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् भने केहि राशिका मानिसलाई धन सम्बन्धित कुनै समस्या हुँदैन। यी ५ राशिका मानिसमा कहिले पनि आर्थिक अभाव रहँदैन …. वृष राशि धर्मशास्त्रका […]
तपाई आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने ब्रह्म मुहूर्तमा ओछ्यान छाड्नुहोस् । यदी कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी कोही दोष भएमा भाग्यले साथ दिँदैन । कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ उपाय अपनाउन सकिने शास्त्रले बताएको छ । शास्त्रमा भनिएको छ … वर्ण कीर्ति मन्ति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति । ब्राह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छि […]
कोरोनाबाट अस्पतालको ल्याबमा कार्यरत २८ वर्षीय युवकको मृत्यु